Bamunini vakandizvambura nyoro kupfuura zvandinoitwa nemurume wangu! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Bamunini vakandizvambura nyoro kupfuura zvandinoitwa nemurume wangu!
Kunakirwa neMboro yaBamunini brother yemurume wangu.Ndinonzi Mai Belinda ndogara muHarare nemurume wangu and his young brother arikuenda kuUZ uko.
Ndakasvika kumba mumwe musi ndachibva kumashops and dropped off nyama muKitchen and rushed into the bathroom to get a wet towel as it was HOT, handina kuziva kuti maive nemunhu. Ndakaita kunge ndichafa pandakavhura door ndokuona Bamunini vakamira mushower vachibonyora vakabata panty yangu thong vakavhara maziso.
Ndakaona kuti munhu haana chaakaona ndokuramba ndakayeva hangu munhu achibonyora nepace. Akatunda achidaidzira nevoice repamusoro achidaidza zita rangu. Ndakapererwa ndikashaya zvekuita ndokubva padoor paye ndisina kuonekwa.
Ndakabuda panze ndokupinda mumba manje ndichidaidzira kunge ndichangosvika. Ndakanzwa bamunini vachidaira nebroken voice. Ndakavati “I thought maenda kuchikoro” Vakapindura vachiti vanga vasina malectures. Things went back to normal hazvo but what I had seen was stuck with me.
Mboro yacho yanga yakanaka and I realised kuti bamunini vanondida or vanoda zvekundisvira. I began to notice zvinhu zvakawanda from Bamunini, somehow he had a soft spot for me always offering to help me when he is home. Kana ndisipo ndaiwana vasuka nekubika but once in a while ndaishaya mapanties angu usually andinenge ndabvisa.
One day ndakati ndoda kumbovatenda and i decided to tempt him kuti ndione kuti vanoita sei. Ndakasvika vari muroom mavo vachiona film palaptop ndakapinda ndikati are you busy? Ivo vakati no he was just watching the TV series Game of thrones. Ndakabva ndati plan ndikati “oooo i love that film” ndokurara next to him pabed ndokutanga kuona film iya navo.
Ndaive ndine kaSummer dress kangu kadiki saka pakurara kwangu pabed ndakabva ndaona dress richikwira kumusoro. Ivo vakaita number 1 kuona izvi and i noticed kuti he was not focused on film anymore but vaitarisa makumbo angu. Ndakabva ndatanga kushiringinya kuti dress rangu rikwire kumusoro ndakaona maziso avo achiita kunge achaputika nekuyeva apa panty yangu nemagaro were in view.
Previous articleNdakati ndakabata ndokukafongoresa pasofa ndokuiti shweeee nekumashure!
Next articleNyoro neMusoja WeMazizamu paKadoma – Part 1